मेन्जेल्रोल एसीटेट पाउडरको लागि सबैभन्दा व्यापक परिचय AASraw
/ब्लग/मेसेल्रोल एसीटेट/मेन्जेल्रोल एसीटेट पाउडरको लागि सबैभन्दा व्यापक परिचय
प्रकाशित 07 / 01 / 2018 by Dr. Patrick Young मा लेखियो मेसेल्रोल एसीटेट. यो संग0टिप्पणी.
मेग्राल्रोल एसीटेट पाउडर बारे सबै कुरा
1.Megestrol एसीटेट समीक्षा (सीएएस: 595-33-5)
2। कसरी मेन्ड्रोल्रोल एसीटेट काम गर्दछ?
3। कसरी मलाई लीजिए एसीटेट पाउडर राम्रो छ?
4.क्या विशेष सावधानीहरू मेड्रोल्रोल एसिसेट पाउडर लिनु अघि?
5। मैले मलाई ईन्डेक्ट्रोल एसीटेट पाउडर कसरी लिनुपर्छ?
6. विशिष्ट जनसंख्या मा मेग्राल्रोल एसीटेट पाउडर
7। यस औषधिको भण्डारण र निपटान बारे मैले के गर्नु पर्छ?
8.Megestrol एसीटेट साइड इफेक्ट
9.Megestrol एटेटेट प्रयोग वजन प्राप्त को लागि ध्यानपूर्वक विचार गरिनै पर्छ
10 के मलाई मेजेन्ज्रोल एसीटेट पाउडरको बारेमा थाहा पाउनु भन्दा महत्त्वपूर्ण जानकारी के हो?
11 .म मेसेल्रोल एसीनेट मा म अधिक जानकारी प्राप्त गर्न सक्छु?
Megestrol एसीटेट पाउडर भिडियो
I.Megestrol एसीटेट पाउडर आधारभूत क्यारेक्टरहरू:
नाम: मेसेल्रोल एसीटेट पाउडर
आणविक सूत्र: C19H26O3
आणविक वजन: 302.41
पिघल प्वाइन्ट: 244-246 ° C
रंग: सेतो पाउडर
1। मेसेल्रोल एसीटेटसमीक्षाहरू (CAS:595-33-5)
मेसेल्रोल एसीटेट पाउडर एक प्रकार को हार्मोन उपचार हो। यसलाई मेगेस वा मेज्रोल (भनिन्छ)595-33-5)। यो हार्मोन प्रोजेस्टोनको एक पुरुष संस्करण हो। प्रोगोस्टेरोन एक महिला हार्मोन मध्ये एक हो तर पुरुषहरूले यसको पनि सानो मात्रामा उत्पादन गर्छन्।
मेसेल्रोल एसीटेट पाउडर निम्न क्यान्सरहरु को लागि एक उपचार हो जुन फिर्ता आए वा फैलिएको छ जहां देखि शुरू भयो।
♦ स्तन क्यान्सर
♦ गर्भ कैंसर
यो पनि खराब भूखको उपचार हो। यदि तपाइँको क्यान्सर वा यसको उपचारको कारण वजन गुमाउनु भयो भने तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई यो सुझाव दिन्छ। डाक्टरहरूले यसलाई कैंसर वा यसको उपचारको कारण गर्म फ्लुशहरूसँग उपचारको लागि पनि प्रयोगको रूपमा प्रयोग गर्न सक्दछ।
2। कसरी गर्छ मेसेल्रोल एसीटेटकाम गर्ने?
मेसेल्रोल एसीटेट हार्मोन थेरेपीको प्रकार हो। हार्मोनहरू रासायनिक पदार्थ हुन् जुन शरीरमा ग्राउण्ड्सहरूद्वारा उत्पादन गरिन्छ, जसले रक्त प्रवाहमा प्रवेश गर्दछ र अन्य ऊतकहरूमा असर पार्छ। (उदाहरणका लागि, टेबुलमा बनाइएको हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पुरुष आवाज जस्ता आवाज र बढ्दो शरीरको कपालको लागि उत्तरदायी छ)। क्यान्सरको उपचार गर्न हार्मोन थेरेपीको प्रयोग अवलोकनमा आधारित छ जुन सेल हार्मोनको लागि आवश्यक हार्मोनहरूको रिसेप्टर केही ट्यूमर कोशिकाहरूको सतहमा छ। हार्मोन उपचारले काम गर्दछ; सक्रिय हार्मोन को लागि एक निश्चित हार्मोन को उत्पादन, हार्मोन रिसेप्टरहरुलाई अवरुद्ध, या रासायनिक समान एजेन्टहरु लाई प्रतिस्थापन गर्न ट्यूमर सेल द्वारा उपयोग नहीं गर्न को लागि रोक। विभिन्न प्रकारका हर्मोन उपचारहरू उनीहरूको प्रकार्य र / वा हार्मोनको प्रकारले प्रभाव पारेको छ।
Megestrol एसीटेट एक हो progestin (हार्मोन प्रोजेस्टरोनको एक मानव निर्मित फारम)। यसमा गुणहरू छन् जुन सामान्य एस्ट्रोजन चक्रमा हस्तक्षेप गर्दछ। यो एस्ट्रोजन को निर्भर ट्यूमर कोशिकाहरुमा सेल विकास को उत्तेजना संग हस्तक्षेप गर्दछ। त्यहाँ पनि गर्भाशय पर्खाल (endometrium) को अस्तर मा केहि सीधी प्रभाव हुन सोचेको छ।
मेज्रोल्रोल एसीटेटको एक पक्ष प्रभाव वजन भएको छ। यस प्रभाव को सटीक तंत्र स्पष्ट छ, तर प्रभाव शरीर को बोसो मा वृद्धि को नेतृत्व मा। यस साइड इफेक्टको फायदा उठाउँदै, मेजेन्ड्रोल एसीटेट अध्ययन गरिएको छ र तीव्र भूख हानि (एनाक्सिया), मांसपेशी बर्बाद (क्याससिया) र क्यान्सर र एड्ससँग सम्बन्धित वजन घटाने प्रयोग गर्न प्रयोग गरिन्छ।
3। मेसेज्रोल एसीटेट पाउडर कसरी उत्तम छ?
तपाईंको डाक्टरले आदेश दिए अनुसार यो औषधि (मेन्जेल्रोल एसीटेट पाउडर) प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईलाई दिइएको सबै जानकारी पढ्नुहोस्। नजिकका सबै निर्देशनहरू पछ्याउनुहोस्।
♦ सबैभन्दा लाभ प्राप्त गर्न, खुसी नगर्नुहोस्।
♦ तपाईंको औषधि वा अन्य स्वास्थ्य हेरविचार प्रदायकको रूपमा तपाईंलाई यो औषधि (मेन्जेल्रोल एसीटेट पाउडर) राख्नुहोस् राख्नुहोस्, तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने पनि।
म खुसी छु भने के गर्छु?
♦ जतिबेला तपाईं यसको बारे मा सोच्नु भएको छुटेको खुट्टा लिनुहोस्।
♦ यदि तपाईंको अर्को खुराकको लागि समय नजिक छ भने, मिस गरिएको खुसी छोड्नुहोस् र तपाईंको सामान्य समयमा फर्कनुहोस्।
♦ एकै समयमा वा अतिरिक्त खुट्टामा2खुट्टाहरू नदिनुहोस्।
4। क्यामेरा एसीटेट पाउडर लिनुअघि कुन विशेष सावधानीहरू राख्नु हुन्छ?
♦ तपाईंको चिकित्सक र फार्मासिस्टलाई बताउनुहोस् यदि तपाईं एसीटेट पाउडर, कुनै पनि अन्य दबाइहरु, वा मेग्राल एसीटेट पाउडर, निलम्बन, वा ध्यान निलम्बन मा निष्क्रिय सामाग्री मा मेग्रार्ज्रोल गर्न एलर्जी हुनुहुन्छ। निष्क्रिय अवयवहरूको सूचीको लागि तपाईंको डाक्टर वा औषधकर्तालाई सोध्नुहोस्।
♦ तपाईंको डाक्टर र फार्मासिस्टलाई के भन्नुहुन्छ कि तपाईले लिइरहेका वा लिने योजना राख्नु पर्दछ कि नुस्खा र गैरप्रणाली औषधिहरू, भिटामिनहरू, पोषण सप्लामे र हर्बल उत्पादनहरू। एंटीबायोटिक्स र इन्निभियर (क्रिक्सिव्यान) उल्लेख गर्न निश्चित हुनुहोस्। तपाईंको डाक्टरले तपाइँको दबाइहरूको खुट्टा समायोजन गर्न वा तपाईंलाई सायद प्रभावहरूको लागि सावधानीपूर्वक निगरानी गर्न आवश्यक पर्दछ।
♦ तपाईसँग तपाईको डाक्टरलाई भन्नुहोस् यदि तपाईसँग सँगै शरीरमा, र स्ट्रोक, मधुमेह, वा गुर्दे वा लिभर रोगमा रक्त खण्ड थियो।
♦ यदि तपाईंको गर्भवती हो भने तपाईंको डाक्टरलाई भन्नुहोस्, गर्भवती हुने योजना वा स्तनपान गर्ने योजना हो। यदि तपाईं मेड्रोल्रोल एसीटेट पाउडर गर्दा गर्भवती हुनुहोस्, तुरुन्तै तपाइँको डाक्टरलाई कल गर्नुहोस्। मेज्राजल एसीटेट पाउडरले भ्रूणलाई हानि पुऱ्याउन सक्छ। जब तपाईं मेड्रोल्रोल एसीटेट पाउडर गर्दै हुनुहुन्छ उनीहरूको स्तनपान नगर्नुहोस्।
♦ तपाईले थाहा पाउनु भएको छ कि मेग्राल्रोल एसीटेट पाउडर महिलाहरु मा सामान्य मासिक चक्र (अवधि) संग हस्तक्षेप गर्न सक्छ। तथापि, तपाईले मान्नु हुँदैन कि तपाईं गर्भवती हुन सक्नुहुन्न। गर्भावस्थाबाट बच्नको लागि विश्वसनीय नियन्त्रणको एक विश्वसनीय विधि प्रयोग गर्नुहोस्।
♦ यदि तपाइँ शल्यक्रिया गरिरहनुभएको छ भने, दन्त सर्जरी सहित, तपाईंको उपचारको बेलामा वा केही समय पछि, डाक्टर वा दन्त चिकित्सकलाई बताउनुहोस् जुन तपाई हो मलाई एन्टेटरेट लेपाउडर।
तपाईंको डाक्टरले ठीकसँग लिनुहोस्। ठूलो वा सानो रकम वा सिफारिस भन्दा लामो समय नदिनुहोस्। तपाईंको नुस्खा लेबलमा दिशानिर्देशहरू पछ्याउनुहोस्।
एक खुट्टाको उपाय गर्नु अघि राम्रोसँग मौखिक निलम्बन (तरल) हिलाउनुहोस्। विशेष खुराक-मापने चम्मच वा दबाइ कपको साथ तरल मापन गर्नुहोस्, नियमित तालिका चम्मचको साथ। यदि तपाइँसँग खाने-माप उपकरण छैन भने, तपाईंको औषधकर्तालाई सोध्नुहोस्।
मेगेस ES मा मेसेस भन्दा मेग्रेन्ड्रोल एसीटेट पाउडर को उच्च एकाग्रता हो। यदि तपाईंको डाक्टरले तपाईंको ब्रान्ड, बल, वा मेन्डेन्डल एसीटेट पाउडरको प्रकार परिवर्तन गर्दछ भने तपाईंको खुट्टाको आवश्यकता परिवर्तन हुन सक्दछ। तपाईंको फार्मेसिस्टलाई सोध्नुहोस् यदि तपाईसँग औषधिमा प्राप्त औषधिको बारेमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने।
यदि तपाईसँग शल्यक्रिया भएमा तपाईंको खुट्टाको आवश्यकता परिवर्तन हुन सक्छ, बिरामी छन्, तनावमा छ, वा संक्रमण छ। तपाईंको डाक्टरको सल्लाह बिना तपाईंको औषधि खुट्टा वा तालिका परिवर्तन नगर्नुहोस्। नमी र गर्मीबाट कोठाको कोठामा स्टोर गर्नुहोस्।
6। प्रयोग गर्नुहोस् मेसेल्रोल एसीटेटविशेष आबादीमा पाउडर
गर्भावस्था श्रेणी X [चेतावनीहरू र सावधान रहनुहोस् (5.2)]। कुनै पनि पशु टटापोलोजी जानकारी क्लिनिक रूपमा प्रासंगिक खुट्टामा उपलब्ध छैन। Megestrol एसीटेट पाउडर को कम खुराक संग उपचार गर्भवती चूहों (अनुशंसित नैदानिक ​​खुराक 0.02 गुणा) को परिणामस्वरूप भ्रूण वजन र जीभ को संख्या मा कमी, र पुरुष भ्रूण को स्त्रीकरण।
♣ नर्सिङ आमाहरू
नवजात मा प्रतिकूल प्रभाव को सम्भावना को कारण, यदि माईजेड्रोल एसीटेट पाउडर को आवश्यकता हो भने नर्सिंग को रोकन को लागि चाहिए।
♣ बाल रोग प्रयोग
बाल रोग रोगहरूमा सुरक्षा र प्रभावपूर्ति स्थापित गरिएको छैन।
♣ Geriatric प्रयोग
एडिक्ससँग रोगीहरूमा अन्वेक्सिया, क्यासिसेक्सिया, वा अज्ञात बेरोजगार अभावको कमीमा मेजेन्डल एसीटेट पाउडरको क्लिनिकल अध्ययनले 65 वर्ष र पुराना उमेरका साना रोगहरू समावेश गर्दैन भनेर निर्धारण गर्नका लागी उनीहरूले साना रोगीहरूको तुलनामा फरक प्रतिक्रिया दिएनन्। अन्य रिपोर्ट क्लिनिकल अनुभवले वृद्ध र साना रोगीहरू बीचको प्रतिक्रियाहरूमा मतभेदको पहिचान गरेको छैन। सामान्यतया, वृद्ध रोगीको लागि खुट्टा चयन चयन गर्नु पर्छ, सामान्यतया डाइने रेंजको कम अन्तमा सुरू हुन्छ, कम हेपेट, नर्वे, या कार्डियक फंक्शनको अधिक आवृत्तिको प्रतिबिंबित गर्दछ, र गर्भनिरोधक रोग वा अन्य औषधी थेरेपी।
मिडिल्रोल एसीटेट पाउडर गुर्दे द्वारा पर्याप्त रूपमा उत्तेजित हुन्छ, र यस औषधिमा विषाक्त प्रतिक्रियाहरूको जोखिमले बिरामीको गुर्दे समारोहमा रोगीहरूमा अधिक हुन सक्छ। किनकि वृद्ध रोगीहरू रेजिना प्रकार्यको कमजोरीको सम्भावना बढी छन्, खुराक चयनमा हेरचाह गर्नुपर्छ, र यो रेडल प्रकार्यको निरीक्षण गर्न उपयोगी हुन सक्छ।
♣ महिलाहरूमा प्रयोग गर्नुहोस्
मेग्लेल एसीटेट पाउडर एचआईभी संक्रमित महिलाहरुमा सीमित प्रयोग भएको छ। क्लिनिकल परीक्षणहरुमा सबै 10 महिलाहरु लाई सफलतापूर्वक रक्तचाप रिपोर्ट गरियो। मेग्लेल एसीटेट पाउडर एक प्रोजेस्टेरोन डेरिभेटिभ हो, जुन महिलाहरु मा योनि खून बहकाउन सक्छ।
यो औषधिमा राखिएको कंटेनर राख्नुहोस्, कडा बन्द, र बच्चाहरूको पहुँचबाट बाहिर। यसलाई कोठाको कोठामा भण्डारण गर्नुहोस् र अतिरिक्त गर्मी र नमीबाट (बाथरूममा छैन)।
सबै औषधि दृष्टि देखि बाहिर राख्न र बच्चाहरु को धेरै कंटेनर सम्म पुग्न महत्त्वपूर्ण छ (जस्तै साप्ताहिक गोली दिमागहरू र आँखा ड्रपहरू, क्रीमहरू, प्याचहरू र इन्शेरर्सहरूका लागि) बाल-प्रतिरोधी र युवा बालबालिकाहरूले तिनीहरूलाई सजिलै खोल्न सक्छन्। जवान बालबालिकालाई जहरबाट बचाउनको लागि, सधैँ सुरक्षा टोपहरू लक गर्नुहोस् र द्रुत रूपमा औषधिलाई सुरक्षित स्थानमा राख्नुहोस् - जो एक माथि र टाढा छ र उनीहरुको नजरबाट बाहिर पुग्छ र पुग्छ।
विशेष अनुयायीहरूमा अप्रत्यक्ष औषधिहरू हटाइनु पर्दछ कि पितर, बालबालिका, र अन्य व्यक्तिहरूले उनीहरूको उपभोग गर्न सक्दैनन्। तथापि, तपाईंले यस औषधिलाई शौचालयको तल फाल्नु हुँदैन। यसको सट्टा, तपाईंको दबाइको निदान गर्ने उत्तम तरिका एक दबाइ फिर्ता लिने कार्यक्रम मार्फत छ। तपाईंको फार्मासिस्टमा कुरा गर्नुहोस् वा तपाईंको सामुदायिक रुपमा फिर्ता लिने कार्यक्रमहरूको बारेमा जान्नको लागि तपाइँको स्थानीय कचरा / रिसाइकिलिंग विभागलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। अधिक जानकारीको लागि www.aasraw.com लाई खोज्नुहोस् भने तपाईंलाई फिर्ता लिने कार्यक्रममा पहुँच छैन।
8। एमegestrol एसीटेटसाइड इफेक्ट
मेगेस (मेग्रेन्ड एसीसेट, यूएसपी) मौखिक निलम्बन भनेको महिला हार्मोन प्रोजेस्टोनको जस्तै मानव निर्मित गरिएको रसायन हो जुन रोगको कारण भूख र वजन घटानेको प्रयोग गर्न प्रयोग गरिन्छ, र यो पनि उन्नत स्तन क्यान्सर र अन्तरामितीय क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ। मेक्सेस सामान्य रूपमा उपलब्ध छ। मेगेसको सामान्य साइड इफेक्टहरू समावेश छन्:
· भूखमा परिवर्तनहरू
पेट पेट दुख्यो
· छाला खानुहोस्
सुस्त सुस्त (अनिद्रा)
· यौन क्षमता / इच्छा कम भयो
संकुचित हुनुको कारण
महिलाहरूले मासिक धर्मको अवधिमा परिवर्तनहरू अनुभव गर्न सक्छन्, जसमा अप्रत्याशित योनि खनिज सहितको सिफारिस गरिएको छ। सिफारिस गरिएको वयस्क प्रारम्भिक खुराक मेगेस ओरल निलम्बन 800 मिलीग्राम / दिन (20 एमएल / दिन) हो। मेगेस इन्सुलिन वा मौखिक मधुमेह दबाइ संग अन्तरक्रिया हुन सक्छ र यी औषधिहरूको प्रभाव घटाउन सक्छ र रक्त शर्कराको स्तर बढ्न सक्छ। यदि तपाइँसँग मधुमेह छ भने, रक्त शर्कराको निरीक्षण गर्नुहोस् र यदि तपाइँ असामान्य परिवर्तनहरू देख्नुहुन्छ भने तपाईंको डाक्टरसँग कुराकानी गर्नुहोस्। मेगेस इननिभियर, वा इन्सुलिन वा मौखिक मधुमेह औषधि संग कुराकानी हुन सक्छ। आफ्नो डाक्टर सबै दबाइहरु लाई बताउनुहोस् र तपाईले प्रयोग गर्नुहोला। गर्भावस्थाको समयमा मेगेसको प्रयोग हुनु हुँदैन। यो भ्रूणमा हानि हुन सक्छ। यस औषधि प्रयोग गर्दा बालबालिकाको उमेरको उमेरले जन्म नियन्त्रणको प्रयोग गर्नुपर्दछ। यो औषधि स्तन दूधमा जान सक्छ र नर्सिङ शिशुमा अनावश्यक प्रभाव हुन सक्छ। यस औषधि प्रयोग गर्दा स्तनपानको सिफारिस गरिएको छैन।
हाम्रो मेगेस (मेग्रेन्ड एसीसेट, यूएसपी) साइड इफेक्ट्स ड्रग सेन्टरले यो औषधी लिँदा सम्भावित साइड इफेक्टहरूमा उपलब्ध औषधिको जानकारीको समग्र दृश्य प्रदान गर्दछ।
यो साइड इफेक्टहरूको पूर्ण सूची होइन र अन्य हुन सक्छ। साइड इफेक्टको बारेमा चिकित्सा सल्लाहको लागि आफ्नो डाक्टरलाई कल गर्नुहोस्। तपाईले FDA मा 1-800-FDA-1088 मा साइड इफेक्टहरू रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
9। वजन हासिल को लागि मेग्रोल्रोल एसीटेट उपयोग ध्यानपूर्वक विचार गरिनै पर्छ
मेग्रोल्रोल एसीटेट (595-33-5) भूख मा एक शक्तिशाली प्रभाव संग एक अग्रेषित एजेन्ट हो। यो प्रारम्भिक एक गर्भनिरोधक एजेन्टको रूपमा प्रयोग भएको थियो; तथापि, वजन को सामान्य साइड प्रभाव को ओक्सिसेनिक एजेंट को रूप मा यसको वर्तमान उपयोग को कारण बन्यो। एमए को प्रशासनले एचआईवी-सम्बन्धित बर्बाद गर्ने र क्यान्सरको साथमा रोगीहरूमा भूख र शरीरको वजनमा पर्याप्त वृद्धि गर्छ। MA वर्तमान मा खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) को लागि स्वीकृत छ एचआईवी-सम्बन्धित वजन घटाने। यसबाहेक, दुवै स्वस्थ, सामुदायिक-बासिन्दाका पुराना व्यक्ति र वृद्ध व्यक्तिहरूले दीर्घकालिक हेरविचार सुविधाहरूमा बस्ने, शरीरको वजनमा शक्तिशाली वृद्धिमा एमएको प्रयोगको परिणाम। यी सेटिङहरूमा एमएक्स जस्ता एक्सेक्सिगेनिक एजेन्टहरू प्रयोग उपयुक्त छ किनकि अनौठो वजन घटाने बढेको मृत्युदरसँग सम्बन्धित छ। वास्तवमा, MA ले शरीरको वजन र अन्य anexigenic एजेन्सीहरू जस्तै ड्रोनबेनल र ईसिसेप्सेन्टिनोनिक एसिड भन्दा ठूलो प्रभावमा प्रभाव पार्छ। तथापि, पुरानो व्यक्ति र क्यान्सर वा गुर्दे विफलता संग रोगहरु, वोसो प्रिन्सिपल वा वजन को मात्र एकमात्र भाग हो, कंकाल मांसपेशिहरु वा मोटो-मुक्त मास को अन्य घटक को सानो आचरण संग। एमए को प्रयोग को धेरै साइड इफेक्ट्स को बीच, टेस्टोस्टेरोन र एस्ट्रोजन उत्पादन को दमन प्रमुख छ। प्रोस्टेट क्यान्सरको साथमा पुरुषहरुमा अन्य प्रभावकारी अरोनजन दबाइदिने उपचार (फ्लोटामाइड, बिलिक्युटाइड) को सामान्य उपयोग गर्नु भन्दा पहिले, यो सेटिङमा प्रयोग गरिएको थियो। वास्तवमा, वृद्ध पुरुषहरूमा, टेस्टोस्टेरोनको नजिकै-कास्ट्रेट तहमा एमए नतिजाहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। एमए पनि स्तन कैंसर संग एस्ट्रोजन को स्तर को दबाने को लागि प्रयोग गरिएको छ।
यो महिना प्रकाशित जेसीईएमले प्रकाशित गरेको छ एचआईवी-सम्बन्धित बर्बाद गर्ने रोगहरू मा वजन बढेको रचनामा टेस्टोस्टेरोन र एमए को संयुक्त प्रभावहरूको जाँच। यो अध्ययनले एक पटक फेरि देखाउँछ, कि एमएले भूख र शरीरको वजनमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव राख्दछ, मोटो लाभ शरीरको वजनमा वृद्धिको मुख्य घटक। तथापि, यो परीक्षणमा कुल शरीरको वजनको साथमा फैटी-मुक्त मास पनि वृद्धि भएको थियो, एचआईभी-सम्बन्धित वजन घटाएर रोगीहरूमा वजन मा एमए प्रभावको अघिल्लो परीक्षा जस्तै। मुलिगन र एट अल। कि टेस्टोस्टेरोन दबाईयो थियो, र टेस्टोस्टेरोन प्रतिस्थापन को वजन बढाव मा रचना मा कुनै असर नहीं पड़ा; यसबाहेक, एमए प्रशासनले लिजीडो कम भयो। यो मोस्टोस्टेरोन उत्पादन मा एमए को यो दबाइ प्रभावशाली प्रभाव र यस रोग को आबादी मा एमए को उपयोग गर्नु भन्दा पहिले दुबला शरीर मास संचरण मा टेस्टोस्टेरोन को प्रभाव को अवरोध मा ध्यान दिनुहोस। एचआईभी रोगीहरूमा लीन जनसामान्य कमजोरीलाई कम र्रोजन स्तरमा जोडिएको छ।
एमए को प्रभावहरु को बारे मा धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरु रहन। यसको प्रयोग सावधानीपूर्वक विचार गर्नुपर्दछ र सावधानीपूर्वक व्यवस्थित हुनुपर्छ। यदि भूखमा सुधार र वोसो माछाको लाभ भनेको क्यास्याक्सिया वा अनावश्यक वजन घटानेको व्यवस्थापनमा वांछनीय लक्ष्य हुन्, एमए अहिले सबैभन्दा शक्तिशाली एक्सेक्सिगेनिक एजेन्सीको रुपमा रहेको छ। यो प्रयोग एस्ट्रोजन उत्पादनको एड्रेनाल दमन र दमनको सम्भावनाको विरुद्धमा हुनुपर्दछ। यसको antiandrogen गुणहरूको कारण, एमए को एन्टिआनाबोलिक प्रभाव टेस्टोस्टेरोन प्रशासन द्वारा ameliorated छैन।
10। मलाई मेन्जेल्रोल एसीनेट को बारे मा जानना सबै भन्दा महत्वपूर्ण जानकारी के होपाउडर?
मेसेल्रोल एसीटेट पाउडरले बेग्लै बच्चालाई हानिकारक बनाउन सक्छ वा जन्म दोषहरूको कारण हुन सक्छ। यदि गर्भवती हो भने मेज्रोललाई प्रयोग नगर्नुहोस्।
तपाईंले मलाई ईजेस्टेल पाउडर लिनु भन्दा पहिले, तपाईंको डाक्टरलाई यदि मधुमेह वा स्ट्रोक वा रक्त क्लटको इतिहास बताउनुहोस्।
यदि तपाईसँग शल्यक्रिया भएमा तपाईंको खुट्टाको आवश्यकता परिवर्तन हुन सक्छ, बिरामी छन्, तनावमा छ, वा संक्रमण छ। तपाईंको डाक्टरको सल्लाह बिना तपाईंको औषधि खुट्टा वा तालिका परिवर्तन नगर्नुहोस्।
मेगेस ES मा मेसेस भन्दा मेग्रेन्ड्रोल एसीटेट पाउडर को उच्च एकाग्रता हो। तपाईंको फार्मेसिस्टलाई सोध्नुहोस् यदि तपाईसँग औषधिमा प्राप्त औषधिको बारेमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने।
11। मैले मेग्राल्रोल एसीटेटमा थप जानकारी कहाँ पाउन सक्छु?
♣ सीएएस: 595-33-5
♣ ब्रान्ड नाम: मेगेस®, मेगेस® ES
टैग: Megestrol एसीटेट पाउडर किन्नुहोस्, मेसेल्रोल एसीटेट पाउडर
कृपया आफ्नो नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्। एक मान्य ईमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्। कृपया सन्देश प्रविष्ट गर्नुहोस्।
CAPTCHA पार गर्न कृपया जाभास्क्रिप्ट सक्षम गर्नुहोस्
कति 4-DHEA टेस्टोस्टेरोनमा रूपान्तरित हुन्छ? प्रयोगात्मक औषध J147 (1146963-51-0) अल्जाइमरको उमेर
मार्शल on -Phenylpiracet को बजार मा7बेस्ट नोट्रोपिक्स (स्मार्ट ड्रग्स)
फेलिक्स on -Phenylpiracet को बजार मा7बेस्ट नोट्रोपिक्स (स्मार्ट ड्रग्स)
विक्रम पर्मर on -Phenylpiracet को बजार मा7बेस्ट नोट्रोपिक्स (स्मार्ट ड्रग्स)
व्यवस्थापक, व्यवस्थापक on -Phenylpiracet को बजार मा7बेस्ट नोट्रोपिक्स (स्मार्ट ड्रग्स)
सर्वश्रेष्ठ बिक्रेता उत्पादनहरू
एस्ट्रा-4, 9-diene-3, 17-dione
सनफिरमको बजारमा7बेस्ट नोट्रोपिक्स (स्मार्ट ड्रग्स)
नोपप्पको बजारमा7बेस्ट नोट्रोपिक्स (स्मार्ट ड्रग्स)
Bromantane को बजार मा7बेस्ट नोट्रोपिक्स (स्मार्ट ड्रग्स)
8 प्रश्नहरू आफैलाई सोध्नु अघि सीटिलिस्ट्रा पाउडर लिनु अघि
Clenbuterol (CLEN) एचसीएल पाउडर
सिबूत्राम हाइड्रोक्लोराइड पाउडर
रेटेड45 बाहिर
प्रतिलिपि अधिकार © 2018 सबै अधिकार सुरक्षित। द्वारा डिजाइन गरियो aasraw.com
Anabolic स्टेरियोड पाउडर निर्माता